Britain oo joojisay masaafurintii madaxa sirdoonka Rwanda - BBC Somali
Britain oo joojisay masaafurintii madaxa sirdoonka Rwanda
11 Agoosto 2015
Image caption Karenzi Karake markaste waxuusheegayay in uusan wax dambi ah galin
Maxkamad ku taala Britain ayaa meesha ka saartay isku day lagu doonayay in madaxa sirdoonka ee Rwanda loogu masaafuriyo dalka Sapain, si maxkamad loo soo taago oo wax looga waydiiyo eedayntii loogu soojeediyay in uu gacan kulahaa xasuuqii dhacay 1994.
Karenzi Karake waxa uu Britain ku joogay damaanad kaddib markii la xiray bishii June.
Warqadda lagu xiray waxaa soo jartay Spain.
Sarkaal maxkamadda ka tirsan ayaa sheegay in eedeymaha gaarka ah ee ku xusan ruqsadda qabashadiisa aysan ahayn dambiyo, marka la eego sharciga dambiile dhoofinta ee Britain.
Jawaabta ka timid dhinaca xukuumadda Rwanda ayaa ahayd mid degdeg ah.
Wasiirka cadaaladda Johnston Busingye ayaa BBC u sheegay in xukuumaddu ay ku faraxsan tahay go'aanka maxkamadda, isaga oo sheegay in uu ahaa kiis cadaalad darro ah oo ay ahayd in uu uusan marnaba maxkamad gaarin.
Xariggan oo dhacay bishii June ayaa dhaliyey caro ka timid dhinaca Rwanda, ayada oo uu madaxwyne Paul Kagame ku eedeeyey waddamada galbeedka qabweyi iyo quursi.